Varavarankely fanodinam-by laser vita amin'ny metaly mirary Ouzhan
Ny fizotry ny metaly dia misy fanapahana laser, izay mampiasa laser mavitrika avo lenta hanoratana sy hanapahana fitaovana. Ny vokatra metaly takelaka dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny tanjaka avo, ny fitondra herinaratra, ny vidiny ambany ary ny fahombiazan'ny famokarana betsaka. Manana fampiasa betsaka izy ireo.
Fantsom-by laser fanodinam-by manokana
Ny fanodinana dia be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, fifandraisana, indostrian'ny fiara, fitaovana fitsaboana ary sehatra hafa. Ohatra, amin'ny tranga solosaina, telefaona finday, ary MP3, ampahany lehibe ny metal sheet. Ho fanampin'izany, ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana ara-pitsaboana izy io, ary koa vatana mangatsiaka sy kamio (kamio), fiaramanidina fiaramanidina sy elatra, latabatra fitsaboana, tafo fananganana (fanamboarana) ary fampiharana maro hafa.
Previous: Faritra vy vy fanapahana laser
Manaraka: Ireo faritra notapahana tamin'ny laser vy vita amin'ny metaly avo lenta